मन्दिरमा जाँदा किन बजाइन्छ घण्टी ? - Nagarik Today
होम » मन्दिरमा जाँदा किन बजाइन्छ घण्टी ?
शास्त्र अनुसार खराब तथा शैतानिक शक्तिहरु भगाई सुखद र आनन्दित वातावरण बनाउनको लागि मन्दिरको प्रांगणमा घन्टी बजाइन्छ । बैज्ञानिक कथन अनुसार घन्टीले हाम्रो दिमागलाई शान्त बनाउँछ र भक्तिभावको लागि एकाग्र बनाउन सहयोग गर्दछ । मन्दिरमा राख्ने घन्टी यसरी बनाइएको हुन्छ कि जब यसले ध्वनि र तरंग उत्पन्न गर्दछ, यसले दिमागको दायाँ र बायाँ दुवै भागलाई एकतामा ल्याई एकाग्रता हुन सहयोग गर्दछ ।
मन्दिरमा यस्ता घन्टीहरु बजाउँदा सामान्यता तिखो तथा गुन्जायमान ध्वनी उत्पादन गर्दछ जसको प्रतिध्वनी ७ सेकेन्डसम्म गुन्जिने गर्दछ । यसरी गुन्जिने प्रतिध्वनी हाम्रो शरीरको ७ उपचारक विन्दुहरू ९ज्भबष्लिन एयष्लतक०लाई उत्तेजित बनाउनको लागि धेरै असल मानिन्छ । यसले शरिरको नकारात्मक उर्जाहरुलाई उन्मुलन गर्न सहयोग गर्दछ ।
मन्दिर घुम्न जानु:प्रायस् प्राचिन मन्दिरहरु उत्तर(दक्षिण ध्रुबबाट सृजित चुम्वकीय र विद्युतीय तरङ्गहरु यथेष्ट मात्रामा प्रवाहित हुने गरि बनाइएको हुन्छ । मन्दिरभित्र मुर्ति राखिएको मुख्य केन्द्र जसलाई गर्भगृह वा मूलस्थान भनिन्छ । सामान्यतस् मुर्ति राखी सकेपछि मात्र मन्दिर स्थापना गरिन्छ । मुर्ति प्रतिस्थापन गर्दा मुर्तिको गर्भगृहमा बैदिक श्लोक सहित तामाका पाताहरु राखिएको हुन्छ जसले पृथ्वीको चुम्वकीय तरङ्गहरु एकत्रित संकलन गरी मन्दिर वरपर चुम्वकीय तरंगहरु प्रसारण गर्दछ ।
जसको कारण आम मानिसहरु मन्दिरलाई घडीको सुइ घुम्ने सुल्टो दिशाबाट घुम्दा ती चुम्वकीय तरङ्गहरु मानिसको शरीरले ग्रहण गर्छ । यो एक अदृश्य र ढिला प्रवाह हुने प्रक्रिया हो । यसर्थ नियमित रुपमा मन्दिरहरुमा सुल्टो दिशाबाट घुम्दा शरीरले यथेष्ट सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुन्छ । बैज्ञानिक कथन अनुसार स्वस्थ जीवनको लागि सकारात्मक उर्जाहरु अत्यावश्यक हुन्छन् ।